बाइबलका कथाहरू: मोशा किन भाग्यो - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
लौ, मोशा त मिश्रबाट भाग्दैछ। अनि मान्छेहरूले उसलाई किन लखेटेको नि? किनकि उनीहरू मोशालाई मार्न चाहन्छन्। तर किन? तिमीलाई थाह छ? हामी पत्ता लगाउने कोसिस गरौं है त।
मोशा मिश्रको राजा फिरऊनको घरमा हुर्केको थियो। पछि गएर मोशा धेरै बुद्धिमान् अनि ठूलो मान्छे बन्यो। मोशालाई आफू मिश्री होइन भनेर थाह थियो। उसको खास आमाबाबु त इस्राएली कमाराहरू हुन् भनेर पनि उसलाई थाह थियो।
चालीस वर्षको भएपछि एक चोटि ऊ आफ्ना मान्छेहरूको हालखबर बुझ्न निस्क्यो। आफ्ना मान्छेहरूलाई असाध्यै खराब व्यवहार गरेको उसले देख्यो। एक जना मिश्रीले त इस्राएली कमारालाई धमाधम कुटिरहेको पो रहेछ। मोशाले यताउता हेऱ्यो, अनि वरपर कोही नदेखेपछि त्यो मिश्रीलाई हिर्काउँदा त्यो मऱ्यो। त्यसपछि मोशाले उसको लासलाई बालुवामा लुकायो।
अर्को दिन मोशा फेरि आफ्ना मान्छेहरूलाई हेर्न गयो। उनीहरू मिश्रीहरूको कमारा हुन नपरोस् भनेर मोशा चाहन्थ्यो। त्यसकारण उनीहरूलाई मदत गर्न चाहन्थ्यो। तर उसले दुई जना इस्राएली नै पो आपसमा झगडा गरिरहेको देख्यो। यसकारण गल्ती गर्ने चाहिंलाई मोशाले यसो भन्यो: ‘तिमी किन आफ्नै भाइलाई कुटिरहेछौ?’
त्यो मान्छेले यस्तो जवाफ दियो: ‘तपाईंलाई कसले हाम्रो राजा अनि न्यायाधीश बनायो? तपाईंले त्यो मिश्रीलाई मारेझैं मलाई पनि मार्न खोज्नुभएको हो कि कसो?’
यो सुनेर मोशालाई डर लाग्यो। मिश्रीलाई मारेको कुरा अरूले पनि चाल पाइसकेछन् भनेर मोशालाई थाह भयो। यो कुरा फिरऊनले समेत सुनेछ। त्यसैकारण मोशालाई मार्न फिरऊनले आफ्ना मान्छेहरू पठायो। मोशा किन मिश्रबाट भाग्नु परेको रहेछ, अब बुझ्यौ त?
मिश्र छाडेर भागेपछि मोशा टाढा मिद्यान भन्ने देशमा पुग्यो। त्यहाँ यित्रो अनि उसको परिवारसित मोशाको भेट भयो। पछि मोशाले यित्रोकै छोरी सिप्पोरासित बिहे गऱ्यो। मोशा गोठालो भएर यित्रोका भेडाहरू चराउन थाल्यो। उसले ४० वर्ष मिद्यान देशमै बितायो। ऊ अब ८० वर्षको भइसकेको थियो। एकदिन यित्रोका भेडाहरू चराइरहेको बेला एउटा अनौठो कुरा भयो जसले गर्दा मोशाको जीवन नै बद्लियो। त्यो अनौठो कुरा के हो, तिमीलाई जान्न मन लाग्छ भने अर्को कथा पढ।
प्रस्थान २:११-२५; प्रेरित ७:२२-२९.
मोशा कहाँ हुर्क्यो तर उसलाई आफ्नो आमाबाबु के हो भनेर थाह थियो?
चालीस वर्षको हुँदा मोशाले के गऱ्यो?
झगडा गर्ने इस्राएलीलाई मोशाले के भन्यो? उसले के जवाफ दियो?
मोशा किन मिश्रबाट भाग्यो?
मोशा भागेर कहाँ गयो र त्यहाँ उसले कसलाई भेट्यो?
मिश्रबाट भागेपछि ४० वर्षसम्म मोशाले के काम गऱ्यो?
प्रस्थान २:११-२५ पढ्नुहोस्।
वर्षौंसम्म मिश्रीहरूको विद्या हासिल गरे तापनि मोशाले यहोवा र उहाँका जनहरूप्रति कसरी आफ्नो वफादारिता देखायो? (प्रस्थ. २:११, १२; हिब्रू ११:२४)
प्रेरित ७:२२-२९ पढ्नुहोस्।
मोशा आफैले इस्राएललाई मिश्रको दासत्वबाट छुटाउन खोज्नुबाट हामी के पाठ सिक्न सक्छौं? (प्रेरि. ७:२३-२५; १ पत्रु. ५:६, १०)